ICT for Myanmar: မေးလွန်းလို့...ပြောပါရစေ...
မနက် မိုးလင်းလို့ ယူနီဖောင်းလေးဝတ်ပြီး ရုံးကိုအလာ ကားမှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှိရင်... (၃) သိန်းဖုန်းတွေ ဘယ်တော့ထွက်မှာလဲ...
ဂျာနယ်ထဲမှာ ... ထွက်တော့မယ် လို့ ပြောနေတယ်...ဆိုပြီး အမေးခံရတာ များလွန်းလို့ ပြောပါရစေဗျာ...
ကျွန်တော်ကလဲ အဲဒီလို အမေးခံရတိုင်း ပြန်ဖြေလေ့ရှိတာကတော့ မသိပါဘူးခင်ဗျာပဲပေါ့...
အဲလိုပြန်ဖြေလိုက်တော့ မေးတဲ့သူတိုင်းက ကျွန်တော့်ကို ဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီက ဖြစ်ပြီးဒါလေးတောင် မသိဘူးလားဆိုပြီး ပြန်ပြောဆိုသွားကြတာကိုခံရပါတယ်။
ဂျာနယ်သမားတွေတောင်သိလို့ ရေးကြတယ်တဲ့... ဒီတော့ ပြောချင်တာက...
ဂျာနယ်သမားတွေ ရေးတဲ့ သတင်းကို သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ... ဒီ ဖုန်းတွေ ထွက်တော့မယ်လို့ ပြောတာ ဘယ်သူလဲ... ဘယ်အချိန်ထွက်မယ်လို့ ပြောတာလဲ...
သူတို့ ဂျာနယ်တွေ ရေးထားတဲ့ အချိန် အတိုင်းတကယ်ထွက်မယ် မထွက်ဘူး... သူတို့ သေချာပြောနိုင်လို့လား...လို့ မေးကြည့်ချင်ပါတယ်..
သူတို့ကတော့ ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းအောင်.... စာမျက်နှာ ပြည့်အောင် ဒီလိုပဲ ရေးကြမှာပါပဲ....
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သိထားတာကတော့... ဒီ GSM project ကြီးက...အခု...တမျိုးဖြစ်လိုက်... တော်ကြာနေ တမျိုးပြောင်းသွားလိုက်နဲ့... ရေရေရာရာ ကိုမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ...
စီမံကိန်းစစဉ်အချိန်က... အစီအစဉ်က တမျိုး.... စပြီး အချိန် အနည်းငယ်ကြာလာတော့ တမျိုးပြောင်းသွားပြန်ပါလေရောဗျာ....
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက အစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်တိုင်း...ကုမ္ပဏီတွေကလဲ လိုက်လံ ပြောင်းလဲ ပြီးလုပ်ကိုင်ရတာဖြစ်လေတော့... ဘာမှ သေချာ မပြောနိုင်ပါဘူး...
သေချာတာတခုကတော့.... ပထမ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ GSM လိုင်းပေါင်း (၄) သန်းကို ရောင်းချနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်နိုင်ဖို့.... Base Transceiver System လို့ခေါ်တဲ့... Radio Station တွေ ပြီးအောင် တည်ဆောက်ရပါမယ်။
Radio Station တခုပြီးဖို့ဆိုတာ အနည်းဆုံး အချိန်အားဖြင့် (၁) လ ကြာပါတယ်။
ရန်ကုန်လို့ မြို့ အတွက် Station အနည်းဆုံး (၄၀) လောက် တည်ဆောက်ရမှာပါ။ ဒီတော့ တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ... SWAP လို့ခေါ်တဲ့... Next Generation ကို Upgrade လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့တဲ့ GSM Radio Station တွေကို Equipment အသစ်တွေနဲ့ အစားထိုး လဲလှယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အရင်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
တဖက်မှာတော့ Station အသစ်တွေ အတွက် အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ခြင်း၊ Tower တိုင်များ တည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့ကို တပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဒါ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ အပိုင်းထဲက တချို့ အပိုင်းတွေပါ။
ဒါတွေ ပြီးပြီဆိုရင်တော့.... Radio Station တွေကို ဆက်သွယ်ပေးမယ့် Transmission အပိုင်းကျန်ပါတယ်။ အဲဒီ အပိုင်း လုံးဝ ပြီးမှသာ... GSM ဖုန်းများ ရောင်းချနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ ... ဘယ်တော့လောက်ရောင်းချနိုင်မလဲဆိုတာ... Schedule အရဆိုရင်တော့ အတိအကျပြောနိုင်ပေမယ့်....
တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ လုပ်ငန်းအားလုံးပြီးနိုင် မပြီးနိုင်ဆိုတာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ပြောနိုင်တာ တခုကတော့ လုပ်ငန်းတွေ သတ်မှတ်ချိန် အတွင်းမပြီးရင် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့... ကုမ္ပဏီတွေဖက်မှ လျော်ကြေး အဖြစ် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ကာ... သတ်မှတ်ချိန် အတွင်းတော့ ပြီးစီးအောင် ကုမ္ပဏီတွေဖက်က ကြိုးစားလုပ်ကိုင်မှာပါ.... Transmission ပိုင်းကတော့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဖက်မှ တာဝန်ယူမှာဖြစ်တဲ့ အတွက်... အဓိကကျတဲ့ ၄င်း ကဏ္ဏကို မပြီးစီးရင်ဖြင့်... လူကြီးမင်းတို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ (၃) သိန်းတန် GSM ဖုန်းများ ကို ရရှိဖို့ရာ အနည်းငယ် အလှမ်းဝေးနေအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြောနိုင်တာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ... အပြည့်အစုံတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
နောက်တခု ပြောချင်တာက...ကျွန်တော်တို့ တွေက ဒီအပိုင်းတွေကို သေချာမသိပါဘူး... သေချာသိတာက GSM စနစ်တခု ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်... ဘယ်လို မျိုးထိန်းသိမ်းရတယ်....ကောင်းမွန်အောင် အလုပ်လုပ်ဖို့ ဘယ်လိုမျိုးတွေ လုပ်ရတယ် ဆိုတာ ပါပဲ။
ဖုန်းတွေ ဘယ်တော့လောက် ရောင်းမယ်... ဘယ်တော့ လောက် ဝယ်လို့ ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ တကယ်ကို အတိအကျ သေချာ မသိပါဘူးခင်ဗျာ။